> Resource > Windows > MOV Editor for Windows 8: Si fudud Edit Your MOV Videos (QuickTime)
Iyada oo sii kordhaya kamaradaha digital iyo kaamirada u muuqdaan in ay toogtaan qaab QuickTime MOV, waxaa laga yaabaa in aad inta badan ka heli kacsan oo ay tafatir dheeraad ah in Windows. Xitaa waxa aad u baahan tahay waa itusi fudud sida qoqobada 90 darajo oo si caadi ah, qaybsama in laga takhaluso qayb aan la rabin, biirtay dhowr clips mid la stop lahayn, iwm Gaar ahaan ka dib markii aad u cusboonaynta in dambayn Windows 8, waxaad xitaa laga yaabaa in aad hore u editor MOV shaqeeya tago. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos MOV on Windows 8 hore oo kale.
Haddii ay arrintu sidaa tahay, Wondershare editor video (Windows 8/7 / XP / Vista taageeray) yimaado editor ah MOV Caawo ee Windows 8 taas oo ka caawisa edit QuickTime MOV videos, MTS videos, oo dhan videos HD oo kale qaabab video oo caan ah. Barnaamijkan haysaa tayada asalka iyo u baahan tahay markii ugu yaraan in ay ka adkaadaan. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u jar karaa videos, biiri clips, ku dar Cajalado, dalban saamaynta, kala guurka, qoraalka, credits iyo wixii la mid ah. Just download maxkamadda free of editor MOV for Windows iyo aad u bilowdo si ay u abuuraan aad masterpiece gaar ah haatan.
Talaabada 1: dejinta aad QuickTime MOV videos
MOV editor video daaqadaha 8 yimaado la album User ah ayaa si aad u maareyso ku daray videos, Cajalado, iyo sawiro istareexsan. Si aad u dajiyaan aad files MOV deegaanka si ay app this, riix "Import" fursad u dhirtuba your computer dooro faylasha aad rabto in aad ku shuban.
Haddii kale, waxaad u soo jiidi kartaa oo iyaga iska suuqa kala barnaamijka ay. Ka dib marka aad iyaga dajiyaan, ay ku tusi doonaa sida thumbnails. Waxaad laab laabi karo riix si aad iyaga ku eegaan oo ka dhacay Delete si meesha looga saaro shayga aan la rabin.
Talaabada 2: Edit iyo kor QuickTime MOV videos in Windows 8
Tafatirka aasaasiga ah, isku darsamaan, jar, Split QuickTime MOV Videos
Milmaan: jiid ah files MOV aad rabto in aad wax ka bedel si Timeline Video ah, ay si toos ah u muuqan wada midowdo doonaa.
Jar: Mouse badan ku laayeen midig ama bidix ee video clip ah oo ku saabsan Timeline, markii a "arrow double" tilmaame u muuqataa, kaliya jiidi in ay jar in dhererka kasta oo aad rabto.
Split: Si aad u kala videos dhowr qaybaha, kaliya ciyaaro aad Video video, jiidi bar slide uu furmo kulanka xiisaha leh ee ay u meel aad u jeclaystay, guji "hako", ka dibna waxay doortaa "kala", aad video waxa loo qaybin doonaa laba qaybood.
Faalladaada ku qor sanduuqa: Dalag, isku beddesha, Flip, Dheellitir dhalaalka, Speed, iwm
Muujinta video clip oo guji Edit icon in toolbar ka, si aad u furmo suuqa edit tagi doonaa. Wax kasta oo aad rabto in aad, kaliya aad u hesho qalab saxda ah ee aad gacanta, oo ay ku jiraan video tafatirka (dalagga, isku shaandheyn, flip, xawaaraha, dhalaalka, bedelkeeda, saturation) iyo tafatirka audio (mugga, libdhi gudaha / dibedda, garoonka, iwm).
In kor loo qaado QuickTime MOV videos la horyaal, Raadka, PIP, guurka, Intro / Credit, iwm
Waa quruxsan fudud si ay u dar horyaal, Raadka, PIP, guurka, Intro / Credit, iwm la editor MOV for Windows 8, waxay keeni dhammaan hawlaha waxay leeyihiin feature jiitaa-n-dhibicda. Tusaale ahaan, si ay u kala guurka daro in video ah, riix tab guurka iyo soo qaado hal template, jiitaa oo hoos u Timeline ah. Waxaad ku eegaan karo video cusub isla markiiba. Haddii loo baahdo, double riix shayga ku daray in ay u astaysto, tusaale ahaan Time ee Muddada.
Talaabada 3: dhoofinta saxar files QuickTime MOV aad
Iyadoo editor MOV for Windows 8, waxaad fursado badan si wax soo saarka aad videos leeyihiin. Markii wax walba oo ku qancay, riix Abuur si ay u helaan suuqa kala saarka. Halkan, waxaad dooran kartaa:
Qalabka : Waxaad dooran kartaa ka iPhone 4, iPad, iPod taabto, PSP, Wii, Creative, iwm si aad u hesho videos filaayo in qalabka aad.
Qaabka : Waxaad awoodi kartaa wax soo saarka video dhammaan qaabab video caan ah sida AVI, wmv, MOV, FLV, MP4, MKV, MPEG, iwm
YouTube : Buuxi macluumaadka account YouTube iyo macluumaadka video sida category, horyaalka, sharaxaad, iwm si ay u wadaagaan on YouTube si toos ah, iyo sidoo kale fariin u gaadhsiin aad on Facebook iyo Twitter.
DVD : Guba aad abuuray files MOV in DVD, DVD folder, ama file ISO image ilaalinta waqti dheer.
Sidoo kale guji si aad u hubiso talaabo talaabo video hoos ku tutorial,
Sida loo Beddelaan MOV (QuickTime) si Lugood